Nyanzvi mukugadzirwa kwe crane nylon inotsvedza ine hupfumi ruzivo |
Kwayakatangira: Huaian Jiangsu Chinyorwa: Nylon, PA6 / MC
Zita: Crane Nylon Slider Technology: Jekiseni / Centrifugal Kukanda / CNC Kugadzira
Ruvara: Tsika Ruvara Sample: Mutengi Mutengi
Brand: Haida Jekiseni: Centrifugal Kukanda
Mune michina yekuvaka, inotsvedza ingangoita chikamu chakakosha. Semuenzaniso, inotsvedza yerutsigiro rwe crane boom yetiraki yakaitwa yendarira munguva yakapfuura. Zvino, mushure mekushandisa iyo MC nylon inotsvedza, hupenyu hwebasa hwakawedzerwa ne4-5 nguva. MC nylon inotsvedza ine hupenyu hwakareba hwebasa uye inogona kuchengetedza lubrication mashandiro kwenguva yakareba mushure meimwe-nguva refueling. Panguva imwecheteyo, zvakare ine zvakanakira kukanganisa kusagadzikana, kusagadzikana kwekudengenyeka, kupera simba kurira, ruzha rurefu, huremu hwakareruka, gungano rakanaka, uye kupfeka kuramba.
Zvakanakira crane nylon inotsvedza
1.Yakanakisa kuita kwakazara, kunyanya yakanaka mechina zvivakwa, kukanganisa kusagadzikana kuri nani pane kwakawanda thermoplastics, zvimwe senge kupisa kupisa, kushomeka kwekushisa tembiricha, kusagadzikana kwemakemikari, magetsi ekuisa zvivakwa, nezvimwe.
2. Kurema kurema uye nyore kutsiva. Deredza kushanda kwevashandi.
Iko kushandiswa kwe crane nylon inotsvedza: kupfeka-kusagadzikana uye kushushikana-kununura zvikamu mumishini, zviridzwa, mota, nezvimwe.
Kupa Mazano: Wona yekutenga vhoriyamu
Zvekupakata: Kazhinji tinoshandisa bubble firimu uye makadhibhokisi mabhokisi, kana zvichidikanwa, matanda mapallet kana mabhokisi emapuranga anozoshandiswa. Zvinhu zvidiki zvakazara mumabhegi ekuzvisimbisa-wega + makatoni. Zvinhu zvakakura zvakarongedzwa mumasaga emapuranga + mabhokisi emapuranga.
Pashure: yemhando yepamusoro Nylon inotsvedza yeKuvaka michini mhando
Zvadaro: Unyanzvi kugadzirwa kwemotokari jekiseni zvikamu zvine hunhu hwakasimba